Mudnaantii uu lahaa Marxuum Galaal lama marin | KEYDMEDIA ONLINE
Mudnaantii uu lahaa Marxuum Galaal lama marin
AUN Marxuum Galaal oo maalin kahor ku geeriyooday weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen Hotel Afrik ayaa loo qaaday Guriceel si loogu aaso.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Madaxweynaha JFS Maxamed Farmaajo oo ay wehliyaan RW Rooble, iyo Madaxweynayaasha dowlad goboleeyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Qoor-qoor, Cali Guudlaawe iyo Laftagareen ayaa waxay ku Shireen xalay madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb oo u jirta 63 Km magaalada Guriceel.
AUN Meydka Marxuum Galaal waxaa isna laga dajiyay maalin kaddib magaalada Guriceel si halkaasi loogu aaso. Marxuumku wuxuu ahaa Janaraal ka tirsanaa Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya, waxa uu ahaa shakhsiyaadka ugu miisaanka culus ee kaalin libaax ka qaatay dagaalladii Itoobiya lala galay ee 1964 -kii iyo 1977 -kii, wuxuu soo noqday Wasiir ku xigeenka Gaashaandhigga iyo Wasiirka Howlaha guud ee dowladdii Kacaanka.
Waxaa lagu ammaanaa inuu ahaa nin ay ku fogaatay Nacaybka kooxda Al-Shabaab, taasoo looga tirtiray deegaano badan oo kamida Galgaduud, sababteedana waxaa la sheegaa inuu lahaa isaga khidaddii loo adeegsaday in la iska riixo.
Madaxda dowladda ee ku shirsan Dhuusamareeb markii iilka loo sii waday midkoodna kuma baraarugin in ay ka qeyb galaan Aaaska Qaran ee marxuumka loo sameenayo, waxay door bideen in ay ushiraan oo ay si hoose u sii showraan inta ay ka imaanayaan ragga iyaga ka aragtida duwan ee Puntland iyo Jubbaland ka socda, waa Saciid Deni iyo Axmed Madoobe.
Labada magaalo ee Dhuusamareeb iyo Guriceel waxay isku jiraan 63 Km, waxaana loo socon karaa qiyaastii 30 daqiiqo, haddii uu daaho gaariga sida mas’uuliyiinta wuxuu soconayaa 1 saac. Mas’uuliyiinta halkaas ku shirsan 1 Saac oo safar ah oo ay kaga qeyb galayaan Aaska-Qaran ee Major General Galaal loo sameynayo culeys kuma ahan, balse waxaa soo baxaya tuhunkii ahaa in ay dowladdu wax ka ogeyd dilka AUN Marxuumka.
Isku socodka magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb baryihii udambeeyay waxaa ka jiray cabsi xoog leh, dhowr jeer oo hore waxaa lala wareegay deegaanka Ceeldheere oo ka tirsan dhuusamareeb, waxaana waddada xiriirisa labada magaalo la dhigay miino taasoo lagu qarxiyay ciidamo ka trisan kuwa dowladda Soomaaliya ee halkaas ku sugan.
Baqdinta Shabaab ee ka baajisay in ay ka qeyb galaan Aaska marxuum Galaal waxaa uga darneyd oo loogu abaal guday in ay cabsi iyo walwal agweed seexan waayaan xalay kaddib markii magaalada Dhuusamareeb afarteeeda jiho lagu garaacay Hoobiyayaal laga soo tuuray duleedka magaalada Dhuusamareeb oo ah meel u xoreysan Al-Shabaab oo ay ka fushadaan howlahooda argagax gelin.
Mudnaantii uu lahaa Meydkii Marxuum Galaal lama marin, dowladduna waxay dowlad ku tahay waa dadkeeda iyo deegaankeeda oo ay ka dhiciso cadawga, haddii ay Amnigii ku fashilmeen, oo Shabaabkiina ay laynayaan shacabka, cid ka hor taagan oo ka yureyneesana aysan jirin, haddii iilka loo wadana cabsi awgeed aan la sagootin karin maxay dowladdu usii sheeganeysaa jiritaan Dowladnimo?